Fintim-baovao 15-10-12 | mandimby maharo
Posted on 15 October 2012 15 October 2012 by Mandimby Maharo
Nifoha tamin’ny torimasony tamin’iny herinandro lasa iny ny Radio Free Fm. Tsiahivina fa ny 22 jolay hariva no nanambara ireo tompon’andraikitra ao amin’ity onjapeo tsy miankina iray ity fa ampitsahatra ny fampitana izany izy ireo. Ny antony: voalaza fa nisy andia-miaramila sy zandary nikasa ny hisambotra azy ireo sy haka ny fitaovana. Nambara manko fa mpiray tsikombakomba tamin’ireo mpikomy teny amin’ny toby RFI Ivato izy ireo. Izy ireo tokoa manko no anisan’ny nampita ilay filazana nalefan’ireo mpikomy ireo voalohany tamin’io andro io. Tsy nahazoana fanazavana avy ao amin’ny foloalindahy ny amin’ny nety nisian’ny fanenjehana azy ireo. Fa ny zavanisy dia nisy hatrany ny fitadiavan’ny fitondram-panjakana ny toerana nieren’ireo mpanao gazety sy mpanentana fandaharana tao. Taty aoriana ary moa dia ny DST mihintsy no niditra an-tsehatra saika hisambotra azy ireo tao amin’ny masoivohon’ny Afrika Atsimo. Samy toa efa leo ny fangalam-piery koa na ireto mpanao gazety ireto na ny avy ao amin’ny Emmo.
Vita tamin’ny alakamisy 11 oktobra tao amin’ny toby Ratsimandrava ny fifamidram-pahefa teo amin’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena teo aloha sy ny jeneraly Ravalomanana Richard. Tonga nanatrika izany fotoana izany mihintsy moa ny Fat Andry Rajoelina. Fotoan-dehibe ho an’ny zandarimaria io indrindra amin’izao fotoana sarotra mampirongatra ny asa ratsy manerana ny nosy izao. Izay indrindra no nampaherezan’ny Fat azy ireo ka nampanantenany koa fa dia ho ampina ara-pitaovana izy ireo. Eo ny fiaramanidina izay ho avy tsy ho ela. Ho ampina koa ny fiara tsy matahotra lalan-dratsy. Ny kaomandy ny zandarimaria vaovao kosa dia nampita resaka momba ny tokona hisian’ny fiaraha miasa eo amin’ny zandary sy ny fitsarana. Manahirana ihany hoy izy ny mahita olon-dratsy voasambotra ary ananana porofo fa meloka nefa dia votsotra eny amin’ny fitsarana. Sady manahirana ny fiarahamonina izany no mandany vola ny zandary koa.
Ny maresaka avy any ivelany koa no anisan’ny nanamarika iny herinandro lasa iny. herinandro roa lasa izay dia nisy baomba nalefan’ny tafika siriana ka latsaka tany amin’ny sisi-tanin’ny Torkia dia nanapakevitra ity farany fa hiaro tena ka hamaly isak’izay mety ho endrika fanafiahana azy. Misy hatrany araka izany ny fifamaliana tifitra eo amin’ny tafika roa tonta any amin’ny sisitany iraisany. Ireo tafika siriana izay manenjika ireo mpitsoam-ponenana maro mihazo an’i Torkia. Ny tiorka kosa miaro ny taniny. Niakatra kosa nefa ny hatezeran’ny Siria ny alarobia teo raha nosakanan’ny ministeran’ny fitanterana tiorka ny fiaramanidina avy any Rosia hihazo an’ny Damaskosy. Nampangain’ny Torkia mitondra fitaovam-piadiana manko io fiaramanidina io. Notazonina ora 9 moa ity fiaramanidina ity ary notanana ny entana sasany tao aminy. Ireo entana ireo izay namafisin’ny Praiministra tiorka Recep Tayyip Erdogan fa fitaovan-tserasera fampiasan’ny tafika. Tezitra koa ny rosiana noho ny fitazonana sy ny fanelingelenana nahazo ireo terataniny sy ny fiaramanidiny. Ny mpanara-baovao moa dia efa samy manahy fa tsy ho ela intsony dia hisy ady mahamay ao amin’io faritra ampovoan’ny Eraopa io.
Ny vondrona eropeana no nahazo ny loka Nobel amin’ny fandriampahalemana 2012. Izany dia noho izy manampy amin’ny fametrahana fandriampahalemana manerana ny tany amin’ireo fanampiana omeny. Mizarazara ihany nefa ny hevitry ny mponina any Eraopa satria misy amin’izy ireo no tsy mahatsapa izany amin’izao olana arabola mahazo ny firenena sasany mpikabana ao amin’ity vondrona ity izao. Ho an’ireo mpahay tantara kosa dia miendrika fanambatambazana ny eropeana ihany izao. Ny eropeana izay sehatry ny ady lehibe roa nefa nahavita nitabatra indray. Amin’izao olana sedrainy izao nefa dia mitady hahazo vahana ny Néonazisme ka omena fampherezana i Eraopa mba tsy hiditra amin’ny ady intsony. Voalohany ity vondrona ity no nahazo ity loka ity.
Teo koa ny fanombokan’ny fihaonam-ben’ny Oif atsy Congo. Maromaro ireo nanakiana ity fihaonana ity. Toy ny filoha frantsay François Hollande ohatra dia nilaza marindrano fa tsy tokony ho ekena ny fanatanterahana izany any amin’ny tany tsy manaja ny zon’olombelona sy tsy manaraka ny fenitra demokratika. Teny izay nahintsiny ihany ny alakamisy lasa teo nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety tao amin’ny RFI, France 24 ary ny Tv5 Monde.
Ny zavamisy miandry amin’ity herinandro ity kosa dia ny (mety) hiverenan’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana an-tanindrazana. Mialohan’ny 18 oktobra moa raha ny voalaza fa tsy maintsy hiverenany. Aleo tsy asina resaka be ny amin’io fa eto isika hahita azy
Tags: Free Fm, Oif, siriaCategories: Actralité